Maamulka Rugta Ganacsiga Puntland oo ka warbixiyay Bandhiga Carwada Puntland (SAWIRO) – SBC
Maamulka Rugta Ganacsiga Puntland oo ka warbixiyay Bandhiga Carwada Puntland (SAWIRO)
Waxaa si dardar leh uga soconaya Xarunta Jaamacada Bariga Afrika ee Magaalada Boosaaso Diyaarinta goobta lagu soo bandhigayo Carwada Caalamiga ee Puntland taasi oo ay wadaan Maamulka Rugta Ganacsiga Puntland oo ay ku mideysan yihiin Ganacstada & Sidoo kale Ganacstada.
Goobta lagu wado inay ka dhacdo Badhiga Carwada Caalamiga ee Puntland oo ay kormeed ku sameyeeen Maamulka Sare ee Rugta Ganacsiga &amp; warshadaha Puntland ayaa waxaa halkaas ay kula kulmeen in si dardar leh loo wado Diyaarinta Goobta Carwada ah.
Gudoomiyaha Rugta Ganacsiga Puntland Maxamuud Xayir Ibraahim ayaa waxaa uu ka hadlay isaga oo jooga Xarunta lagu qabanayo Carwada Caalamiga ee Puntland in uu u mahadcelinayo Ganacstada Guud ahaan dadaalka ay u galeen inay ka shaqeeyaan Bandhiga Carwada Caalamiga ee Puntland Taasi oo si dardar leh u socota Carwadan oo ah carwo caalami ah ayaa waxaa ay noqoneysa Midii ugu horeysay ee nooceeda ah oo lagu qabto Deegaanada Puntland waxaana carwadan sidoo kale lagu soo bandhigi doonaa Ganacsiga qaar ee Wadada Xiriirka ganacsi ay puntland Leeyihiin Sida Djibouti, Yemen,iyo kuwo kale. Xarunta Jaamacada oo ay si aad ah uga socoto.
Howsha Diyaarinta Carwada ayaa waxaa sidoo kale ka hadlay Mid ka mid ah Masuuliyiinta Rugta Ganacsiga Puntland oo lagu magacaabo Cali Caydiid ayaa sheegay inay ay si weyn ugu mahadcelinayaan jaamacada Bariga Africa oo bixisay Goobta lagu qabanayo Carwada.
Goobta Carwada lagu qabanayo oo ay booqdeen Koox wariyaal ah ayaa waxaa ka muuqday Dardar Xoogan & Tartan ay kujiraan Ganacstada oo la xiriira in Shirkad walba ay ku soo bandhigto Waxyaalaha ay ka ganacsato.
Carwada Caalamiga ah ee Puntland ayaa waxaa alabaaha ay shirkaduhu ku soo bandhigi doonan Waxaa ay noqon doonan kuwo ka qiimo Jaban Qiimihii hore loo siin jiray taasi oo ah fursad ay helayaan Dadweynaha Puntland Shanta Maalmood ee Carwadaas bandhigeeda uu soconayo.
said salah says:
waan ku faraxsanahay sida sharafta leh oo ay rugta ganacsiga puntland us soo ban dhigayso wax qabadyada bulshada puntland we colloborate